ကိုယ့်ပေါင်ကို လှန်ထောင်းခြင်း (၁)
ကျွန်တော်ဗျာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို မနက်ဖြန် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမယ်. . လိုက်ခဲ့ပါလား . . ကထိန်ပွဲ ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မိ ပါတယ် . .
အဲ့ဒီမှာပဲ သူကမေးပါလေရောဗျာ . . တန်ဆောင်မုန်းလမှာ ကထိန်ခင်းတာဟုတ်လို့လားတဲ့ . . အဲ့ . သူပြောမှ ဇဝေဇဝါ
တောင်ဖြစ်သွားတယ် . . .
ငယ်ငယ် ၁တန်းတုန်းသင်ခဲ့ တာတွေ ပြန်ရွတ်ကြည့်ရတော့တာပေါ့ ဗျာ . .. .
တကယ်ပါဗျာ . . စာတွေဘယ်ပြန်ကုန်တယ်မသိတော့ဘူး. . အလွတ်မရလို့ ငါးပါးကို မှောက်ရော . .
ချွေးပြန်သွားတယ်. . ပြန်ရှာရတယ် Onlineကနေ
တော်သေးတာပေါ့ . . Grade2 Myanmar ဖတ်စာ APK လေး တွေ့ လို့ Downlode ချ ပြီး ပြန်ဖတ်ရတဲ့ ဘဝ. . .
တန်ခူးလ. . . သင်္ကြန်ပွဲ
ကဆုန်လ. . . ဘာညာ စသဖြင့် ပေါ့
အော် . . စာဖတ်အားနည်းခဲ့တော့ မေးလိုက် ရင် ဒိုးကနဲ ဒေါက်ကနဲ မဖြေနိုင်တာကြီးကို ကိုယ့်ကိုကို အားမရတာ. . . . . စာဖတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်. ,:)
Hanzawtun Aye Thu Kha
စင်ကာပူမှာ အလုပ်ရှာနေသူပဲဖြစ်ဖြ စ် အလုပ်ပြောင်းချင်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာ တော်တော်ကြိုးစားယူရမယ့် ကာလပါ.. တကယ့်ကို ဖောင်ဖျက်ပြီး နောက်ဆုံး ကိုယ်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်, လစာ မရရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ ...ပြန်မှာလား ? မရ ရတဲ့ အလုပ်ကို Try မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ ...
အဓိက ကတော့ Online ကနေ ကော အေးဂျင့်တွေကော ကုန်ကုန်ပြောရရင် မြန်မာပြည်အေးဂျင့်တွေထိပါဆင်းပြီး CV တင် Try ထားပါ... လုံးဝ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ။ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ ....ဘယ်အခြေအနေပဲ ရောက်နေပါစေ
ပိုကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ အမြဲ မှတ်ယူထားပါ.. ဒါဟာ မိတ်ဆွေအတွက် အကောင်းဆုံး အားဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ..
Online ကနေ အလုပ်ရှာမယ်ဆိုရင်လဲ Position , ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ Company လိပ်စာတွေကို တွဲပြီး Record လုပ်ထားစေချင်ပါတယ် ... Company က ကိုယ့် CV ကို ကြိုက်လို့ ဖုန်းခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ် Position နဲ့ ဘယ် Company က ခေါ်နေမှန်း မသိပဲ ယောင်ဝါးဝါး Interview သွားဖြေခဲ့တာတွေလဲ ကြုံ ခဲ့ရဘူးပါတယ်...
အလုပ်စရှာပြီဆိုကတည်းက Online / YouTube ကနေ Interview အမေး/ အဖြေ တွေကို ကြိုတင်လေ့လာ/
လေ့ကျင့်ထားစေချင်ပါတယ် ..... အင်တာဗျူးတစ်ခု ပြီးတိုင်း အမြဲသင်ခန်းစာယူပါ.. လိုအပ်ရင် CV ကို Interview တစ်ခါပြီးတိုင်း မေးစရာမလိုတဲ့ အခြေနေထိရောက်အောင် Update လုပ်ထားစေချင်ပါတယ် ...
ဒါတွေက ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲတစ်ချို့ ကို သူငယ်ချင်း/ မိတ်ဆွေတို့ ကိုမကြုံစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ တင်ပြပေးခြင်းပါ ..
သူငယ်ချင်း / မိတ်ဆွေ အပေါင်း ရည်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ကြပါစေဗျာ..
လူတိုင်း သိသင့်သော သုတများ
စာရေးတော့မယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်တွင် အခက်အခဲတွေ ဆက်တိုက်တွေ့ရပါတော့သည်။
မျှော်လင့်ထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် သိပ်မစိုးရိမ်ခဲ့။ ထိုအခက်အခဲတွေကို ပြောပြချင်သည်။ စာစရေး
မည့် သူတိုင်း တွေ့ရမည့် အခက်အခဲဖြစ်ပေသည်။
စာစရေးမည်ဆိုလျှင် သင် စာရွက် (သို့) စာအုပ်ကို အသုံးပြု ရေးမည်လား။ ကွန်ပျူတာရှိသူဆိုလျှင်
Computer ဖြင့်ရေးမည်လား။ ကျွန်တော် စာစရေးသောကာလတွင် ကွန်ပျူတာမ၀ယ်နိုင်သောကြောင့်
စာအုပ်ထဲတွင် ရေးခဲ့ရသည်။ ထိုစာအုပ်များကို ယခုပြန်ရှာမရဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် အလွန်ပင် နှမျော မိတော့
သည်။ ကျောင်းသားဘ၀ကို အခြေခံပြီး ရေးထားသောကြောင့် ယခုပြန်တွေးလျှင် ငယ်သွားသည်ဟုပင်ထင်
ရသည်။ အလွန်အနှစ်သာရရှိသောဘ၀သည် ကျောင်းသားဘ၀ပင် ။
ထို့ကြောင့် စာစရေးမည့်သူ အနေဖြင့် စာရွက် (သို့) စာအုပ်ဖြင့်ရေးမည် ဆုံးဖြတ်ထားလျှင် သေချာမပျောက်
ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားရန် အကြံပေးချင်သည်။ ယခုနည်းပညာ တိုးတက်နေသောခေတ်တွင် လူတိုင်း
ဖုန်းတွေ ကွန်ပျူတာတွေ လွန်စွာအသုံးများလာကြသည်။ ယခုခေတ်လူငယ်များ ကံကောင်းကြသည်။ တိုး
တက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဖို့ လွယ်ကူသလို ပျက်စီးရန်လည်း လွန်စွာ လွယ်ကူသော
စာဖတ် များလာတာနှင့်အမျှ လူတိုင်း အနည်းနှင့်အများ စာရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတတ်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်ပြောလျှင် သင်ငြင်းမည်လော။ ခေါင်းထဲတွင်ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေပေါ်လာသည်။ ပျော်ရွှင်စရာ၊ ကြည်နူးစရာ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော စွန့်စားမှုတွေ ကိုယ်တွေမှာလဲရှိသည်ဆိုတာ သတိပြုမိလာသည်။ စာဖတ်နေရင်း စာကောက်ရေးချင်စိတ် ပေါ်လာတတ်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် မက။ တွေ့ရာစာအုပ်ထဲ ကောက်ရေးမိသည်။
ကိုယ်ရေးသောစာများမှာ အာသီသ ပြေရုံရေးခဲ့သည်ဟု ထင်ခဲ့မိသည်။ သင်ငယ်ငယ်ကရေးခဲ့ဖူးသော အမှတ်တရ မှတ်စုများရှိလျှင် ပြန်ဖတ်ကြည့်စေချင်သည်။ နံမည်ကြီးစာရေးဆရာများ၏ ၀တ္ထု ထက်ပင် ဖတ်ကောင်းနေလိမ့်မည် ။ ညွှန်းပြီးပြောခြင်းမဟုတ်ပေ။
ပြန်ဖတ်လိုက်ရချိန်တွင် မိမိဘ၀၏ လွမ်းမောစရာတွေ ပြန်ပြောင်းသတိရမိသည်။ တစ်ချိန်က အမှားလုပ်ခဲ့မိတာလေးများပါလျှင် ရယ်စရာပင်ဖြစ်နေသေးသည်။ ထိုအရာများသည်
စာရေးဆရာလောင်းလေးများအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ကုန်ကြမ်းများပင်ဖြစ်၏။
How to Celibration on PrintExp part2Myanmar
How to Celibration on PrintExp (part 1) Myanmar
How to Print on Backlit ColorPainter Printer ( Myanmar )
How to unblock Facebook in blocked friends Myanmar
Facebook ပေါ်တွင် Block ခဲ့သော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ များအား Block ဖြေနည်းကို ကျွန်တော် VDO ဖိုင်ဖြင့် ရှင်းပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခုလိုလာရောက် လည်ပတ်လေ့လာသည့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
How to Print on PhotoPRINT DX special Edition (မြန်မာ)
မည်သည့်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်စေ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်သည့် Photo Printing Operator အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ပါ။ ဆက်လက် တင်ပေးသွားပါမည်။
ခုလိုလာရောက် လည်ပတ်လေ့လာသည့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
How to change password on facebook myanmar
Facebook ပေါ်မှာ Password ဘယ်လိုချိန်းရမလဲ ဆိုတာ VDO ဖိုင်နဲ့ ရှင်းပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့  ဆိုဒ် Link တွေ တော်တော်များများ Adf.ly ကြော်ငြာတွေကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ၊ လေးနေတာတွေကို တောင်းပန်ပါရစေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့  နည်းပညာအားနည်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို သေချာပြန်ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ခုလိုလာရောက် လည်ပတ်တဲ့ အတွက် Thank u so much ပါ ။
ဖတ်နေတဲ့ အချိန် စာဖတ်သူလက်ထဲမှာ ကင်မရာ တစ်လုံးရှိရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန် သိပ်ကောင်းဗျ။ ဒီလို မရှိလို့လည်း စိတ်အားမငယ်သွားပါနဲ့။ စာဖတ်ပြီး တက်မြောက်သွားတဲ့ လူတွေလည်း လောကမှာ မနည်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ ကင်မရာ Ebooks Collection (Myanmar) ကိုတော့ ဆောင်ပြီး ဖတ်ပါ။ ဗဟုသုတ အဖြစ် သိသင့်သလောက် ဖတ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
by geek.thantzinhtay@gmail.com 3156k View Download ဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်များသိုလှောင်မှု.pdf
- by geek.thantzinhtay@gmail.com 3979k View Download ဒီဂျစ်တယ်ပုံဖေါ်ခြင်းအတတ်ပညာ.pdf
- by geek.thantzinhtay@gmail.com 2460k View Download နိဒါန်း ။
နိဂုံး.pdf - by geek.thantzinhtay@gmail.com 5078k View Download ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းအဆင့်.pdf
-by geek.thantzinhtay@gmail.com 7118k View Download ပုံ၇ိပ်ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်ဖန်တီးခြင်း.pdf
- by geek.thantzinhtay@gmail.com 4163k View Download သမားရိုးကျဓါတ်ပုံပညာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံပညာနှိုင်းယှဉ်ချက်.pdf
- by geek.thantzinhtay@gmail.com
1748k View Download သမိုင်း၏ရူထောင့်အမြင်.pdf
-by geek.thantzinhtay@gmail.com 2825k View Download အဆင့်မြင့်ဒီဂျစ်တယ်
ဓါတ်ပုံပညာ အထွေထွေအချက်အလက်များ.pdf -by geek.thantzinhtay@gmail.com 14493k View Download ဦးချစ်ဝိန်
အင်တာဗျူး.pdf - by geek.thantzinhtay@gmail.com 1477k View Download Posted by
ကင်မရာ နှင့် ဓါတ်ပုံ ပညာ
မပျင်းနဲ့ပျင်းရိနေရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို တော်တော်နဲ့ မရောက်ဘူး။ ပြောတုန်းကတော့ စီမံကိန်း ချတုန်း ကတော့ မိုးလားကဲလားနဲ့ တကယ်လည်း လုပ်မယ်ကျတော့ နေပူတယ်၊ မိုးရွာတယ်၊ ဇာတ်ကျောတတ်တယ်၊ ခေါင်းကိုက်တယ်၊ ဖျားတယ်နဲ့ဆို တော်တော်နဲ့ ခရီး မရောက်တော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ မပျင်းဖို့လိုပါတယ်။မတွေဝေနဲ့လောကီလူသားပေးပဲ။ တစ်ခါခါ ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ ကြုံတတ်မယ်။ ငါဘာလုပ်နေတာ ပါလိမ့်။ ဒါကို လုပ်လိုက်တော့ကော ငါ့အတွက် ဘာထူးလာမှာလဲ။ အဲ့ထက်ဆိုးတာက တစ်ခုခုကို ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်နေရင်းတန်းလန်း ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားတာမျိုးပေါ့။ အဲဒါ တွေဝေတာ။ ကြိုးစားနေသူ တစ်ယောက်က မတွေဝေဘူး။ ခဏလေး ပျင်းလို့ ဟိုတွေးဒီတွေး လုပ်လိုက်တာနဲ့ တွေဝေ သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တွေဝေရင် ဘဝခရီးနှောင်နှေးပါတယ်။မစိုးရိမ်နဲ့ဖြစ်တောင်မလာသေးဘူး။ ငါလုပ်ကောလုပ်နိုင်ပါ့မလား။ ငါ့အတွက် လုံလောက်တဲ့ Resource တွေ ရှိကော ရှိရဲ့  လား။ လုပ်လိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ရလဒ်က သေချာပါ့မလား အစရှိသဖြင့် စိုးရိမ်စိတ် ဝင်တတ် ကြပါတယ်။ ဒါတွေက မလုပ်ခင် မလျှောက်ခင်ကတည်းက Plan ချထားရမှာလေ။ အဲဒါတွေ မချထားရင်တော့ စိုးရိမ်စိတ်က အမြဲလိုလို ဝင်နေမှာပဲ။အားမငယ်နဲ့ငါ့ဘော်ဒါတွေများ၊ သူတို့တွေများ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ၊ ညာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ၊ ငါ့ကျတော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာသေးပါလား အစရှိသဖြင့် အားငယ်စိတ်က တော်တော်များများ ဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လို ဝင်စရာမလိုပါဘူးကွယ်။ သူတို့လည်း ထမင်းစား၊ တို့လည်း ထမင်းစားပေမယ့် ဘဝပေး ကုသိုလ်၊ ကံကြမ္မာကြောင့် သူတို့မြန်မြန် ဖြစ်သွားကြတာပဲ။ (ဘာဖြစ်တာလဲတော့ မသိဘူး) ကိုယ်က ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို သူတို့ စောစော စီးစီး ရှာမှီးခွင့် ရတယ်လို့ သဘော ထားလိုက်။ ဘာကြီးဖြစ်မှ၊ ညာကြီးဖြစ်မှ အောင်မြင်တယ်လို့ မခေါ်ဘူး။ ကိုယ်ကျင်လည်နေရတဲ့အခြေအနေထဲမှာ စိတ်အကျေနပ်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖန်တီးလိုက်နိုင်ခြင်းကလည်း အောင်မြင်ခြင်း တစ်မျိုးပဲ။ ပြီးတော့မှ နောက်တစ်ဆင့်တက်ပေါ့။ ဒီတော့ တွေးပြီး အားငယ်နေမယ့်အစား သူတို့ထက် ပိုပြီး ကြိုးစားဖို့ အားရှိနေလို့ နောက်ကျ တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် ထားရပါမယ်။ လုံးဝ အားမငယ်ပါနဲ့။အချစ်ဆိပ် မတက်နဲ့ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်။ မထူးဆန်းပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေရလို့ပါ။ လူတွေက ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ အရမ်း Romantic ဆန်သွားရင် ရောင့်ရဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ တော်ပြီလေ။ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေရတာမျိုးမဟုတ်တောင် တိုက်ခန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ နေရရင်ပြီးပါပြီဆိုတာမျိုးနဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက် တွေကို အတိုက်စားခံလိုက်ကြတယ်။ Love ဆိုတာကြီးက The Whole Life မဟုတ်ပါဘူး။ Justapart of life ပါလေ။ စိတ်ညစ်နေတုန်း အားပေးဖော်လေးရှိ၊ ပင်ပန်းနေတုန်း ရေတိုက်မယ့်သူရှိ တာက ကောင်းပေမယ့် ဘယ်သွားသွား ခြေတောက်မှာ တွဲပါနေမယ့် ကျောက်ခဲတုံးကြီးဖြစ်နေရင်တော့ လုံးဝ မကောင်းဘူး။စိတ်နှလုံး ယာယီပျော်ရွှင်မှုအတွက် အတ္တစိတ် နည်းဖို့အတွက် ပေးဆပ် တယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးက လိုအပ်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အလုပ်လုပ်နေလည်း ဖုန်းတွေဆက်၊ ညအိပ်လည်းမဆက်၊ မအိပ်ဆက်၊ တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်တွေ့၊ တွေ့တော့ ၂၄ နာရီ၊ ၈ နာရီက အပြင်မှာ ၈ နာရီက အွန်လိုင်းမှာ အိပ်ချိန်တောင် ညက အိပ်မက်ဆိုး မက်လို့ ကိုကို့ကို သတိရလုိ့ပါ၊ သဲသဲကို သတိရလို့ပါဆိုပြီး ဖုန်းတွေဆက်ကြ နဲ့ အိပ်ရေး ပျက်အောင် လုပ်တဲ့ အခန်းဖော်ကြောင့် တိုက်ခန်း စပ်မငှားတော့တာ ကြာပါပြီ။ ဒီတော့ ချစ်တော့ ချစ်ပါ။ Target တစ်ခုထားပြီး ကြိုးစားနေစဉ် ကာလမှာပေ့ါ။ အဆိပ်တော့ မတတ်ပါနဲ့။ ဖြေဆေးမရှိပါဘူး။ ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ကျရှံးစေမယ့် အကြောင်းပြချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။အပျော်မမက်နဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်၊ စိတ်ထွက်ပေါက်ဆိုပြီး ဘော်ဒါတွေနဲ့ သောက်လိုက်မယ်။ စားလိုက်မယ်။ ကဲလိုက်မယ်။ လုပ်တော့ လုပ်ပေါ့။ ဒါကိုလည်း Limit လေးတော့ ထားလေ။ ကိုယ်လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကို ပျက်ပြားလောက်အောင် အပျော်တွေ အရမ်းများနေရင်လည်း မကောင်းဘူး။ ပြီးတော့မှ ငါ့ကို အရက်ဝိုင်းတိုက် ကောင်တွေ သူတို့ကျတော့ Project ပြီးသွားပါလားဟ ဆိုပြီး နောင်တတွေ ရနေလိမ့်မယ်။ အချို့ က ကိုယ့် အောင်မြင်မှုအတွက် တစ်ဖက်သားကို လမ်းလွဲအောင်လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုအချိုသတ်ပြီး ဆီစမ်း ပဲဆီနံလေး မွေးလိုက်တာလို့ ရေရွတ်နေရင်း ဘဝပျက်သွားပါမယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း ဘယ်သူမှ မဖျက်ပဲ ကိုယ်တိုင် ဝါသနာနဲ့ကို ပျော်တတ်တာလည်း ရှိတယ်လေ။ Limit လေးနဲ့တော့ ကဲကြပေါ့။ အိနြေ္ဒရရလေး ပျော်နိုင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ ထပ်လောင်းပြောချင်တာက ကြိုးစားနေတဲ့ ဘဝရဲ့  အရသာဆိုတာဟာလည်း ပန်းတိုင်ရောက်မှခူးဆွတ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အသီးမသီးသေးပေမယ့် အရွက်တွေ ခူးပြီး ဟင်းစားလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျ ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ အချို့ က Quality of Life ကိုမေ့သွားကြတယ်လေ။ ဒီတော့ အောင်မြင်မှုအတွက် ပန်းတိုင်ကို ထားရှိပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကတော့ စက္ကန့်တိုင်းဟာ ပန်းတိုင်ပါပဲ။အားလုံး ကြိုးစားရကျိုးနှပ်တဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ။အောင်ခမ်း (TSJ team)
တစ်ဆက်တည်းပဲ လူငယ်တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာများကို လည်း ပြောပြပေးပါလို့
တောင်းဆိုတတ်ကြတယ်။ ဝေဖန်ရေးကို လိုလိုလား လား တောင်းခံတဲ့စိတ်မျိုးရှိတာ လူငယ်တွေကို ချီးကျူးရမယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့ အရွယ် လူကြီးတွေတောင် ဝေဖန်ရေးကို လက်ခံတတ်ကြတာ မဟုတ် ဘူး။
ဝေဖန်သူကို ‘ကက်ကက်လန်’ပြန်ပြီး ရန်တွေ့တတ်ကြတယ်။ ကိုယ့် မှာ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုအပ် နေတာတွေကို သိချင်စိတ် ရှိတာလည်း ကောင်း တာပဲ။ တစ်ပါးသူကို ထောက် ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာက ပိုပြီး နှစ် လိုဖွယ် ကောင်းတယ်။ ပလွှားစိတ် မရှိ တာကို ညွှန်ပြတယ်။ ဒီအချက်
တွေကြောင့်လည်း လူငယ်တွေနဲ့ ‘ပလဲနံပသင့်’ တာ ဖြစ်တယ်။ လူကြီးတွေ(အထူးသဖြင့်)မြို့သားပညာတတ် လူကြီးတွေက အများအားဖြင့် ဟန်များတယ်။ (ခုခေတ်စကားနဲ့ဆို ပဲများတယ်ပေါ့)။ တကယ် သိတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သိချင်တတ်ချင်ယောင် သိပ်လုပ်တတ်ကြတယ်။
တယ်။ မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတယ်။ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ပရိသတ်ကိုညာပြီး သရေထိုး သွားတဲ့ လုပ်ပွဲမျိုးဆိုရင် သည်းခံမနေဘူး။ ၀ိုင်းပြီး အော်ကြဟစ်ကြ ဆူကြတာပဲ။ လက်ဝှေ့ထိုးတယ်ဆိုတာ အရှုံးအနိုင်သိဖို့ ဖြစ်တယ်။ အရှုံးအနိုင် အဖြေမထွက်ရင် ပွဲပြီးတယ်လို့ မယူဆဘူး။ ပညာတတ်လောကမှာ
ရေပန်း စားတဲ့ Win-Win ဆိုတာ တကယ့်ပြိုင် ပွဲတွေမှာ မရှိနိုင်ဘူး။ ပြိုင်ပွဲ ဆိုကတည်း က အရှုံးအနိုင်သိဖို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ သရေဆိုတာက ပွဲမပြီးသေးဘူး။ နောက်ထပ် ပြိုင်စရာ ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ ဘောလုံးပွဲမှာ ပူးတွဲပထမဆိုတာ မရှိဘူး။ ရာသီကုန်မှာ အမှတ်တူ၊ ဂိုးကွာခြားမှု တူ
ဖြစ်နေရင် အဲဒီနှစ်သင်း ထပ်ကန်ရတယ်။ သရေဖြစ်နေရင် အချိန်ပို ကစားရတယ်။ အချိန်ပို ထိ သရေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် အရှုံးအနိုင် မပေါ်မချင်း ပယ်နယ်တီကန်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရတယ်။
ဟန်မဆောင်တတ်တာ၊ ပွင့်လင်းတာကြောင့် လူငယ်တွေနဲ့ပိုပြီး ရင်း ရင်းနှီးနှီး နေဖြစ်တယ်။ သူတို့စိတ်ထဲ ရှိတဲ့အတိုင်း ပြောတာကို ကိုယ်က နားထောင်ပေး သလို၊ ကိုယ်ပြောတာတွေကိုလည်း သူတို့က စေတနာ မှန်နဲ့ ပြောတာပဲဆိုပြီး လက်ခံတယ်။ လူကြီးနဲ့လူငယ် သဟဇာတဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးက စေတနာ မှန်ဖို့ပဲ။ လူငယ်တွေက သူတို့လိုအပ် တာတွေ ထောက်ပြပါဆိုရင် ကိုယ်မြင် တွေ့ တဲ့အတိုင်း ပြောလိုက်တယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေထဲက သူတို့ မကြိုက်တာတွေ ကို ပြောရင်လည်း လက်ခံသင့်တာကို လက်ခံပြီး ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်တာကို ရှင်းပြ လိုက်တယ်။ ဟန်လုပ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ‘ဗုံနဲ့မြှောက်’ နေတာ မျိုး
တွေမရှိဘူး။ လူကြီးရော လူငယ်ပါ စိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်။ စကားပြောရ တာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကျိုးရှိတယ်။
အဲဒီလိုလူငယ်တွေက သူတို့ လူငယ်များအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာ ဘာလဲလို့ မေးကြတာကိုလည်း ကိုယ့်ခံယူချက်အတိုင်း ဖြေလိုက်ပါ တယ်။ မျှော် လင့်ချက်နဲ့ စံပြုပုဂ္ဂိုလ် (Role Model) ဆိုတဲ့အရာနှစ်မျိုးဟာ လူငယ်တိုင်း အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာ ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာ မာ ပြတ်ပြတ် သားသား ရှိမှ လူ့လောကမှာ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး (Somebody) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ခု မရှိရင် ပဲ့မပါတဲ့လှေလို ဟို ဘက် မျောလိုက်၊ဒီဘက်မျောလိုက်နဲ့ ဘယ်သောင် ဘယ်ကမ်းမှ ဆိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ လူရာမ၀င်တဲ့ (Nobody) ယောင်ခြောက် ဆယ် အဖြစ်နဲ့ နိဂုံးချုပ်ရမှာ သေချာတယ်။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့် အဓိပ္ပာယ် ရှိနေတာ ဖြစ် တယ်။ မျှော် လင့် ချက် ကင်းမဲ့တဲ့ဘ၀ဟာ အသက်ရှင်လျက် သေနေတဲ့ဘ၀ ဖြစ်တယ်။ ဘာမှ အနှစ်သာရမှ မရှိဘူး။ အချည်းနှီးပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲဆင်းရဲ တစ်နေ့မှာ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ က လွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရှိရင် ဆင်းရဲပေမယ့်
ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။ ဆင်းရဲလို့ စိတ်မချမ်းသာတာ မပျော်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ မျှော်လင့်ချက် မရှိလို့ စိတ်မချမ်းသာတာ၊ မပျော်နိုင်တာ။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စိတ် ကူးယဉ်မှုဆိုတာ ဆိတ်သုဉ်းသွားရင် အဲဒီလူဟာ ရှင်လျက်သေနေတဲ့သူပဲ။ ဘာမှ သုံးစားလို့ မရတော့ဘူး။ လူမှန်ရင် မျှော်လင့်ချက် ရှိရမယ်။ စိတ်ကူး ယဉ် တတ်ရမယ်။
အထူးသဖြင့် လူငယ်မှန်ရင် စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေ အမြဲမက်နေရမယ်။ အိပ်မက် မမက်တတ်ရင် လူငယ် မဟုတ်ဘူး။ ”ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ …” ဆိုတာ အရှုံးသမားရဲ့ လက်သုံးစကား ဖြစ်တယ်။ လူငယ်မှာ ဒါပေမဲ့ (but) ဆိုတာ လုံးဝမရှိရဘူး။ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်း သာ ရှိရမယ်။
လောကမှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ ဘာမှမရှိဘူး။ မလုပ်ရသေးလို့ မဖြစ်သေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်။ သွားရင်ရောက်တယ်။ ယူရင်ရတယ်။ မဉ္ဇူသက နတ်ပန်းကိုမှ ဆွတ်ချင်သလား။မရမချင်း ဆွတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရင် မရဘဲ မနေဘူး။ ရမှာသေချာတယ်။ ဇွဲနဲ့သတ္တိ မရှိဘဲ ရတာကိုပဲ ယူလိုက်ပါတော့မယ် ဆိုရင်တော့ မဉ္ဇူသကနတ်ပန်းကို မရဘဲ ခေါင်ရမ်းပန်းကိုပဲ ရလိမ့်မယ်။ ခေါင် ရမ်းပန်းကို ခေါင်းမှာပန်တဲ့ လူဆိုရင် ရွာသူရွာသားတွေက ရွာထဲလုံးဝ အ၀င်ခံ မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရွာနာတယ်ဆိုပြီး မောင်းထုတ်ကြမှာ သေချာတယ်။
လူငယ်တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ နောက်တစ်မျိုးက စံပြုပုဂ္ဂိုလ် (Role Model)ဖြစ်တယ်။ ကလေး ဘ၀ကတည်းက အားကျအတုယူစရာ စံပြုပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး ရှိနေသင့်တယ်။ စံပြုပုဂ္ဂိုလ်ကို အားကျအတုယူပြီး ကြိုးစားအား ထုတ် မှုဟာ လူတိုင်းအတွက် အရေးပါတယ်။ ရှေးခေတ်က ကိုအောင်ဆန်းတို့၊ ကို ဗဟိန်းတို့ တစ်တွေဟာ အိုင်ယာလန်သူပုန်ကြီး မိုက်ကယ်ကောလင်းကို အား
ကျအတုယူပြီး အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေ ကို မောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်တို့ ဟိုဆေးရီဇော် တို့ကို ချီးကျူးခဲ့ ကြတယ်။ နောက်ခေတ် လူငယ်တွေ ကျတော့ မော်စီတုန်းနဲ့ ဟိုချီမင်း၊ ကက်စထရိုနဲ့ ချီဂွေဗာရား၊ ငုယင်ဗန်ထရွိုင်းစတဲ့ တော်လှန်ရေး သမားကြီးတွေကို စံပြုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အားကျ အတုယူခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘ၀ကဆိုရင် အင်္ဂလိပ် ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ရော် ဘင် ဟုဒ်လို၊ အိုင်ဗင်ဟိုလို မတရားမင်းတွေကို ဆန့်ကျင်ခြားနားပြီး ဆင်းရဲသား တွေကို ကူညီတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေကို သိပ်အားကျခဲ့ရတယ်။ ကစားရင်တောင် ရော်ဘင်ဟုဒ် လုပ်တမ်းမှ ကစားချင်တယ်။ ထောင်အ ကြိမ်ကြိမ် ကျခဲ့ရတဲ့ သ တင်း သမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာ ငယ်စဉ် က ရော်ဘင်ဟုဒ်တို့၊ အိုင်ဗင်ဟို တို့ကို အားကျအတုယူခဲ့လို့ ထင်ပါရဲ့။ အခုခေတ် ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေမှာ အဲဒီလိုစံပြုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး တော်တော် ရှားပါးတာ တွေ့ရတယ်။ ကျောင်းသင် ဖတ်စာ တွေထဲမှာ မတွေ့ရသလို အပြင် ဖတ်စရာတွေထဲမှာလည်း မတွေ့နိုင်ဘူး။ ဒီခေတ်မှာ ရော်ဘင်ဟုဒ်လို လူစွမ်းကောင်းတွေ မတွေ့နိုင်တော့ပေမယ့်မျက်စိ နှစ်ဖက်စလုံး မမြင်ရတဲ့သူနဲ့ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး ပြတ်နေသူတွေက ဧ၀ရက် တောင်ထိပ် ကို ရောက်အောင်တက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်တွေ၊ ၁၃ နှစ်သမီးလေး တစ်ယောက်တည်း ရွက်လှေတစ်စင်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ပတ် ပတ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ
နေ့စဉ်တွေ့မြင် ဖတ်ရှုနေရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါတွေဟာ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေ အတွက် စံပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
၁။ ဂဏန်းသမားများ မည်သည့်လတွင်မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက် မွေးသူများကို ၁ ဂဏန်းသမားများဟု
ခေါ်သည်။ ၁ ဂဏန်းသမားများဟုခေါ်သည်။ အချစ်နှင့်အမှန်းကြား နယ်နိမိတ်သည် မျဉ်းကြောင်းငယ်လေးမျှသာဖြစ်မည်။ ချစ်မိ၊ တွယ်တာ မိပြီဆိုက အရာရာပေးဆပ်တတ်ပြီး မုန်းပြီဆိုက လှည့် မကြည့်။ အလွန် ချစ်တတ်သလို အငြိုး အတေး ကြီးတတ်သည်။ မေတ္တာတရားနှင့် ချစ်ခြင်းအပေါ် အလေးအနက်ထား၍ ဘ၀အဖေါ်ရွေးချယ်လင့်ကစား ဂုဏ်၊ ငွေကြေးတို့ကို အဓိကထားသည်ဟု အများမှ အထင်လွဲခြင်းခံရ တတ်သည်။ အသက် ၂၅ နှစ်မတိုင်မီ သူတစ်ပါး ကတိစကားများ အပေါ်ယုံစားမိ၍ စိတ်သောက ခံစားရတတ်သည်။ အချစ်ဦးနှင့်ဆုံဆည်းကိန်းမရှိသော်လည်း အချစ်ဆုံးသူနှင့် လက်တွဲရမည်။၂ ဂဏန်းသမားများ
မည်သည့်လတွင်မဆို ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက်မွေးသူများကို ၂ ဂဏန်းပိုင်ရှင်များကအချစ် မေတ္တာဟူသည်
နှလုံးသားနှင့်ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ဆုံး ဖြတ်ရသော အချင်းအရာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဘ၀အဖေါ်ကို
ရွေးချယ် သောအခါ ဦးနှောက်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ မိမိအပေါ် နားလည်ခွင့်လွှတ်၍ ပံ့ပိုးကူညီ ခြင်းရှိသူကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ ကံခေသည်မှာ အချစ်ဆုံးနှင့်
ကွေကွင်းရတတ်ပြီး ချစ်သူက တစ်ယောက်၊ လက်ထပ်ရသူက တစ်ဦး ဖြစ်တတ်သည်။ အသက် ၁၆ မှ ၂၂
နှစ်ကြား မေတ္တာ ကံခေ၍ ၂၂ ကျော်မှ ရင့်ကျက်သော နှလုံးသားဖြင့် ခိုင်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမည်။၃ ဂဏန်းသမားများ
မည်သည့်လတွင်မဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက် မွေးသူများကို ၃ ဂဏန်းသမား များဟုခေါ်သည်။ မျက်နှာပွင့်၍ လူချစ်လူခင် ပေါများမည်။ ချစ်သူရည်းစား တစ်ဦးမကရှိမည်။ သူတစ်ပါး အပေါ် အနိုင်ယူ ဗိုလ်ကျရမှ
ကျေနပ်သူများ ဖြစ်ပေရာ အချစ်စိတ်နှင့် ခံယူမူမှာ ဆိုးနွဲ့ သမျှကို နားလည် ခွင့်လွှတ်သောသူ၊ အနိုင်ယူ ရမည့်သူကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ နှလုံးသားကို ဦးစားပေး၍ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ မှားယွင်းသလို
ပြန်ခံစားတတ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကား အရင်ဆုံး ချစ်သူအပေါ် စိတ်ပြန်လည်သွားမည်။ တစ်ဦးကို အသည်းနှလုံး ပုံပေး၍ ချစ်တတ်သလို တစ်ပြိုင်တည်း အခြားသူ တစ်ဦးအပေါ် ချစ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။
နှလုံးသားအပေါ် ဦးစားပေး လွန်းသူဖြစ်သည်။၄ ဂဏန်းသမားများ
မည်သည့်လတွင်မဆို ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက်နေ့ မွေးသူများကို ၄ ကဏန်းသမားများ ဟုခေါ်သည်။ အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း၊ တစ်ဖက်စွန်း ကျလွန်းခြင်းကြောင့် နှလုံးသားရေးရာ စိတ်သောက ကြုံရတတ်သည်။ ဂုဏ်အနိမ့်အမြင့် မတူသူများ အနက် နိမ့်ကျသူကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်၍ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ကာ ဘ၀မြှင့်တင်ပေးကာမှ မိမိ၏အသည်းကို ခွဲသွားခြင်း ခံရတတ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမူနှင့် ဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံများကို လိုလားသော နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော် ဦးနှောက်နှင့် နှလုံးသားအကြား အမြဲတွေဝေ ဒွိဟဖြစ်ကာ မေတ္တာရေးရာ တွင်စိတ်ဓါတ် တက်လွယ်၊ ကျလွယ်သည်။ ဖြောင့်မှန်ရိုးသာ၍ မိမိကြောင့် တစ်ပါးသူ စိတ်ချမ်းမြေ့ အေးချမ်းရခြင်းကို လိုလားသူဖြစ်သည်။ ပေးဆပ် အနစ်နာ ခံသည်။၅ ဂဏန်းသမားများ
မည်သည့်လတွင်မဆို ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက်မွေးသူများကို ၅ ဂဏန်းသမားများ ဟုခေါ်သည်။ တွေဝေ ဒွိဟဖြစ်တတ်သော သဘော သဘာဝရှိသော်လည်း စိတ်ဓါတ် အလွန်ခိုင်မြဲသည်။ အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်လေ့မရှိ။ မိမိအပေါ် တလေးတစားနှင့် တန်ဖိုးထားသူ၊ တစ်စုံတစ်ရာ အထောက် အကူပြုပံ့ပိုးနိုင်သူကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ အရွေးရခက်အောင် အခွင့်အရေး နှစ်မျိုး ကြုံလာပါက
နှလုံးသား၏ တောင်းဆိုမူအပေါ် ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ အလေးပေးမည့် သူဖြစ်သည်။ မိမိနှင့် အသက် အရွယ်၊ ၀န်းကျင်ဇာတိ သဘာဝမတူ ကွာခြားသူများနှင့် မေတ္တာမျှတတ်သည်။ ချစ်သူနှင့် ခွဲခွာရလေ သံယောဇဉ်
ပြင်းထန်လေဖြစ်သည်။ အလွန်စိတ်ကူးယဉ် ဆန်သော နှလုံးသားဖြစ်သည်။
၆ ဂဏန်း သမားများ
မည်သည့်လတွင်မဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက်မွေးသူများကို ၆ ဂဏန်းသမားများဟု ခေါ်သည်။ သံယောဇဉ်ကြီး၍ ခိုင်မာသော မေတ္တာတရားနှင့် မိမိက ချစ်ရသူအပေါ် အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်
ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဟူသော အယူအဆရှိသည်။ ချစ်ခဲ၍ အချစ်မြဲသည်။ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်း မတူညီသူကို ရွေးချယ်၍ အားလုံးနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် ၀န်မလေး။ အပျော်သဘော စိတ်ကစားခြင်း မရှိဘဲ သစ္စာ တရားရှိမှ အချစ်မေတ္တာသည်
ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု ယူဆထား သူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတစ်ပါးအပေါ် မိမိပေးဆပ်သလောက် ထပ်တူ
ပြန်ကောင်း သူရရန် ခဲယဉ်းပေသည်။ အချစ် မေတ္တာထက် တစ်စတစ်စ ရစ်နွယ်လာသော သံယောဇဉ်ကို
မည်သည့်လတွင်မဆို ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက်မွေးသူများကို ၇ ဂဏန်းသမားများဟု ခေါ်သည်။ အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်၍ လေးလေးနက်နက် ချစ်တတ်သည့် အလွန်အေးချမ်းမြင့်မြတ်သော မေတ္တာပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။ တစ်ပါးသူအပေါ် လွန်လွန်ကဲကဲ စာနာနားလည်တတ်ည်။ အချစ်အတွက် အရာရာ ရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရန် ၀န်မလေးသော်လည်း အချစ်ကိုဖွင့်ဟ ပြောဆိုရန် အလွန်ရှက် သဖြင့် မချစ်တတ်
သောသူဟူ၍ အထင်မှားခံရတတ်သည်။ မိမိအား နားလည်မူ ရှိသူကိုဦးစားပေး ရွေးချယ်သင့်သည်။ အလွန်စန်းပွင့် သော်လည်း ချစ်သူများရန် ၀န်လေးသည် ဘ၀လမ်းကြောင်းတွင် မွေးရပ်၊ ဘာသာ၊ ဓလေ့ ထုံးစံမတူသူများနှင့် မေတ္တာမျှ ရတတ်သည်။
မည်သည့်လတွင်မဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက်မွေးသူများကို ၈ ဂဏန်းသမားများဟုခေါ်သည်။ အရာရာတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သောစိတ်ရှိသလော က် မေတ္တာတရားတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိ။ ချစ်သူကို အလိုလိုက်လွန်း၊ ဦးစားပေးလွန်းသဖြင့် စိတ်သောက ခံစားရတတ်သည်။ ချစ်သူကို အရာရာပြည့်စုံ စေလိုသဖြင့်
ပေးဆပ်တတ်သော သဘာဝကြောင့် မိမိနှလုံးသားကို ခုတုံးလုပ်ခြင်း မျိုးပင် ခံရတတ်သည်။ သီးသန့်
အေးချမ်းစွာနေတတ်ပြီး မနာလိုဝန်တိုခြင်းကင်းသော ကြီးမြတ်သည့် နှလုံးသားအား ပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ အထီးကျန်ဆန်ကာ အားငယ် နေတတ်သော ခံစားချက်ရှိသည်။ သူတစ်ပါး ပစ်ပယ်ထားသူကို စာနာစိတ် အပြည့်နှင့် မေတ္တာ ထားတတ်သည်။၉ ဂဏန်းသမားများ
မည်သည့်လတွင်မဆို ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက်မွေးသူများကို ၉ ဂဏန်း သမားများဟုခေါ်သည်။ အလွန်အချစ်ခံလိုသည်။ မိမိ အပေါ် အေးအေးချမ်းချမ်း သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နူးညံ့စွာ အလေးပေး ဆက်ဆံသူအား လိုလားသည်။ အချစ်အတွက် ဘာမဆို ပေးဆပ်ရဲသည်။ အလွန်မျက်နှာများ၍ ရည်းစား မှိုလိုပေါက်အောင် အပြိုင်ထားလင့်ကစား အိမ်ထောင်ရေးရာတွင် အချစ်ဆုံးနှင့် လွဲချော်၍ နီးစပ်မူ အရှိဆုံးသူနှင့် ဆုံဆည်းရတတ်သည်။ မည်မျှဆိုးသော အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်စေ အိမ်ထောင် တစ်ဆက်တည်း
မြဲစေရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းလေ့ရှိသည်။ အပြင်ပန်းအရ ကြမ်းတမ်းခက်ထန် သည်ဟု ထင်ရလင့်ကစား အတွင်းစိတ်နူးညံ့၍ အပေးသမားသာဖြစ်သည်။ (Copy)
ချစ်သူ (ရည်းစား) ရှာချင်သူများအတွက်
လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် (၁၃) ချက် (၁) မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကိုအရင်ဦးဆုံး မြင်ယောင်တတ်ယ် ၊၊(၂) ဖုန်း ringtone သံကြားတိုင်း၊ မက်ဆေ့ တစ်ခုဝင်တိုင်း သူများလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ ဖုန်းကို ကမမ်းကတမ်း ဖွင့်ကြည့်တတ်တယ် ၊၊ (သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရရင် စိတ်ထဲမှာ အလိုလို ၀မ်းနဲသွားတယ် )(၃) သူနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ထမင်းစားလို့မျိုချရင်တောင် ရင်ထဲမှာဆို့နေတတ်တယ် ၊၊(၄) ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြံကြုံ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေပဲရှိရှိ သူ့ရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရရင် အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားတတ်တယ် ၊၊(၅) တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိတိုင်း (သူနဲ့အတူတူသွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာရောက်တိုင်း၊ သူကြိုက်တတ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုစားတိုင်း ) သူ့ကို အရင်ကထက်ပိုပြီး သတိရသွားတတ်တယ် ၊၊(၆) သူ့ဆီက ဖုန်း ၊ မက်ဆေ့ တစ်ခုခု လာမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဖုန်းကို မကြာခဏ ဖွင့်ကြည့်တတ်တယ် ၊၊(၇) သူ့ကို ဖုန်းဆက်လို့ သူ့ဘက်က ဖုန်းချလိုက်တဲ့ အခါမျိုး၊ မအားသေးတဲ့အခါမျိုး ၊ စက်ပိတ်ထားတဲ့ အခါမျိုးမှာဆိုရင် ရင်ကို မီးစနဲ့ ထိုးလိုက်သလို ထိုင်မရ ထမရ ဖြစ်နေတတ်တယ် ၊၊(၈) သူနဲ့ မတွေ့ရလို့ သူ့ကိုလွမ်းတဲ့အခါတိုင်း သူနဲ့ပို့ခဲ့တဲ့ မက်ဆေ့အဟောင်းတွေကို ပြန်ဖတ်ပြီး အရူးတစ်ယောက်လို ရယ်ခဲ့ ပြုံးခဲ့ဖူးတယ် ၊၊(၉) သူ့မျက်နှာ ညှိုးနေတာကို မမြင်ချင်ဘူး ၊ သူအချိန်တိုင်း ပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲ မြင်ချင်တယ် ၊၊(၁၀) သူ့ဘက်ကအမှားတစ်ခု လုပ်မိလို့ ကိုယ့်ဘက်က စိတ်ဆိုးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ သူကတောင်းပန်လိုက်ရင် ကိုယ့်စိတ်က အလိုလိုညွတ်သွားတယ် ၊ ကြာကြာစိတ်မဆိုးနိုင်ဘူး ၊။(၁၁) သူက တစ်ခြားသူတွေအပေါ်မှာ လိုတာထက်ပိုပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဆက်ဆံတာ မြင်ရင် သူ့ကိ်ု သ၀န်တိုလာတယ် ၊၊(၁၂) ညဘက်ရောက်လို့ သူ့ဆီက Good Night ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့လေးမှ မပို့ဘူးဆိုရင် အိပ်မပျော်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ် ၊၊(၁၃) အခု ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သင်သူ့အကြောင်းကို တွေးနေတယ်၊၊* အဲဒါဆိုရင်တော့ သေချာပြီ ၊ သင့် သူ့ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ တကယ် ချစ်မိသွားပြီ *
အပျိုဖော်ဝင်စကနေ သွေးမဆုံးခင်အချိန် အတွင်းမှာ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရင်သား အဖုအကျိတ်ဖြစ်တာက တွေ့ရများလေ့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီး အများစုက ရင်သားစမ်းသပ်မှုကို ခံယူရမှာ ရှက်ရွံ့တတ် တာကြောင့် ဆရာဝန်ကို ပြသဖို့ အချိန်ဆွဲနေတတ်ကြ ပါတယ်။ သင်က အသက် ၃၀ အရွယ် ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဒီအသက်အရွယ်မှာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ရင်သားအကြောင်းကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
Online Market လိုချင်တာအကုန်မှာလို့ရပါတယ်
တင်ပြီးသမျှ Post များ
Facebook ပေါ်မှာဖတ်ချင်ရင် Like ခဲ့ပါ....
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်
Internation Phone Code
<!-dial code widget - html code - dialcode.org --> International Dialing Codes<!-end of code-->
တရားတော်များ Download ယူရန်
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ အခွေ(၁) ဓမ္မသဘင်များတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ ၁။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရည် (၁) Download ၂။ ဗုဒ္ဓရတနာ့ဂုဏ်ရ...
စင်ကာပူမှာ အလုပ်ရှာနေသူပဲဖြစ်ဖြ စ် အလုပ်ပြောင်းချင်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာ တော်တော်ကြိုးစားယူရမယ့် ကာလပါ.. တကယ့်ကို ဖောင်ဖျက်ပြီး နော...
ကလောင်သစ်များသို့ပေးစာ စာရေးတော့မယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်တွင် အခက်အခဲတွေ ဆက်တိုက်တွေ့ရပါတော့သည်။ မျှော်လင့်ထားပြီး ဖြစ်သောကြော...
How to mix colour & black & white photo tutorial 1 Colour ပုံကို Black & white နဲ့ ရော ပြီး တစ်ပုံတည်း apply ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးထားတာပါ... လွယ်ပါတယ်..အပျင်းပြေ...
ဒီဆိုက်က online မှာငွေရှာချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ငွေရှာနိုင်မဲ့ နည်းတွေထဲက တစ်နည်းဖြစ်တဲ့ PTC (pay to clic...
ဖောက်သည် ကို တစ်ခါ က ပြည့်တန်ဆာ မ တစ်ဦး ဟာ ပြည့်တန်ဆာ မှုနဲ့ တရားရုံး ကို ရောက်လာ ပါရော တဲ့ ။ တရား ခွင်မှာ တရား သူ ကြီး က ……… “‘ ဟေး တရား...
စာဖတ်ဝါသနာအိုးများအတွက် ရှယ် စာအုပ်မျာ:ဒေါင်းရန်
အနာဂတ်မျက်လုံးရှင် (အောင်ခန်.) ကာလီဒေ၀ီ (အောင်ခန်.) လက်သုံးတော်ဓါး (အောင်ခန်.) နေဘုရားတော် (အောင်ခန်.) အမွေ အောင်သင်း သေကိန...
ဥာဏ်ထိုင်းစေသည့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ဥာဏ်ထိုင်းစေမယ့် ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံ ၁၀ ချက်ဆိုပြီး ဆေးပညာ ဝဘ်ဆိုဒ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။ မနက်စာ မစားခြင်း မနက်စာ မစားခြင်းကလည်း ဥာဏ်ထိုင်း...
Android Software လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးနေပါပြီ အမြန်လာယူကြပါ
ရွှေအပေါင်းတို့ရေ .. ကိုယ်ကိုင်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းက Android ဖုန်းဆိုရင် Software လေးတွေ Share ပေးချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီဆော...
မိန်းကလေးများမှ ယောက်ကျားလေးကို အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်
ဇင် ​ဘာ​ဘွေ​နိုင်ငံ​တွင်​ ​အ​မျိုး​သ​မီး​များ​က​ ​အ​မျိုး​သား​များ​ကို​ အုပ်​စု​ဖွဲ့​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​သည့်​ ​ကိ​စ္စ​များ​ကြောင့်​ ​ရဲ​တပ်​...
Androide Application ရေးသားနည်း
Androide Game ရှယ်တကာရှယ်များ
Androide ဖုန်းအတွက် ရှယ်တကာရှယ်လေးများ
Design Font များ
Elglish လို မြန်မြန် ပြောတတ်ချင်ရင်
Kaspersky နှင့် Key များ
M and E အကြောင်း လေ့လာခြင်း
MWD Channel Live
Online ပေါ်မှာ ငွေရှာနည်း
Photoshop Design Books
Virus Softwares အလုပ် လုပ်/ မလုပ်
ဆန်းဆန်းပြားပြား APK ဆော့ဝဲလ် များ
ဖုန်း Free ပြောရအောင်
ဘာသာ စကား စာအုပ် နှင့် အဘိဓာန်
ဘာသာ စကား စာအုပ် နှင့် အဘိဓာန်
ဘလော့ နှင့် ပက်သက်သမျှ
လူတိုင်း သိသင့်သော သုတများ
ကျွန်တော်ကတော့ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ ပညာသင်တစ်ယောက်ပါ...လိုအပ်တာလေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်း အကြံလေးတွေပေးသွားပါအုံးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ....ကျွန်တော်က နည်းပညာတွေ ရသစာပေတွေ၊ ပညာပေးလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ တခြားဆရာ့ဆရာများထံမှ ကူးယူတင်ပြခြင်း သက်သက်ပါ...ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သဘောပေါ့...
ခုလိုလာရောက် လည်ပတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..၀မ်းလည်းသာပါတယ်..
စင်ကာပူမှာ ကွန်ပျူတာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ အခြေခံကနေ ကိုယ်ပိုင် domain name ၀ယ်ပြီး Website ထောင်နိုင်တဲ့အထိ တစ်ဦးချင်း သင်ကြားပေးပါ့မယ်.... Course တွေကတော့ များပါတယ်.. မိတ်ဆွေတို့ သင်ချင်တယ်ဆိုရင် အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်...
Course တွေကတော့ (1) Basic Course
(2) Photoshop Designs Course
(3) using Internet Course
(4) AutoCAD 2D & 3D
၀ီရသူ (မစိုးရိမ်)မြေလတ်သားရွှေဝန်းရတနာတောက်ပကြယ်စင်အရှင်ကုသလသာမိသီတဂူစကားမနာပဒါယီဓမ္မရောင်ခြည်ဓမ္မစေတီဖောင်ဒေးရှင်းဓမ္မအလင်းဓမ္မင်္ဂါတရား ဒေါင်းလုပ်ယူရန်ဆရာတော်ဆန်နီနေမင်းကိုရင်လေး
၀ိညာဉ်သစ်သုတရသစာအုပ်မျိုးစုံမြန်မာသီချင်းစာအုပ်များရွှေစကားစာအုပ်မျိုးစုံအွန်လိုင်းရွှေဝတ္ထုတိုစာပေအိမ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင်အဆိုတော်များရဲ့ သီးချင်းစာအုပ်အစုံသုတရသစာအုပ်စုံလွန်ထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်)စကားဝါမြေအွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်ဂီတာတီးဖို့ သီးချင်းစာအုပ်များMyanmar E-Book NetMY THOUGHT E-BOOKFree မြန်မာသီချင်းစာအုပ်များBurmeseclassic စာအုပ်မျိုးစုံ
နှင်းနုလွင်Burmeseclassis ကျန်းမာရေးမြန်မာပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး
Shweo Myanmar VCDပန်းစကားသီးချင်းမျိုးစုံသီချင်းအိမ် VCD/MP3 မျိုးစုံYoutube Myanmar VCD-MP3Myanmarsong.NetMyitzuri MP3-VCDMyanmar Mp3 AlbumMyanmarMp3.netMyanmar VCDMyanmar MP3
ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်း၊သတင်း ဆိုဒ်များသို့ 
ကိုးရီးယားရှိမြန်မာသတင်းကိုရီးယားရောက်မြန်မာအကြောင်းမြန်မာပြက္ခဒိန်ရက်စွဲကြည့်ချင်ရင်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမြန်မာပို့ စ်သတင်းဂျာနယ်မြန်မာတိုင်း(မ်)ဂျာနယ်ကြေးမုံသတင်းစာပေါ်ပျုလာဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်အလင်းတန်းဂျာနယ်အင်တာနက်ဂျာနယ်လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်ရှိတ်ဂျာနယ်(အညာမြေသတင်းများ)ရန်ကုန်မီဒီယာဂျာနယ်ရတာနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာPathein City ဂျာနယ်Eleven ဂျာနယ်Daily မြန်မာသတင်းစုံဂျာနယ်7Day News ဂျာနယ်
မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်းရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းကောင်းကင်Online မဂ္ဂဇင်းသရဖူမဂ္ဂဇင်းလိုက်ဖ်စတိုင်မဂ္ဂဇင်းပလုပ်တုပ်မဂ္ဂဇင်းFashion MagazineFace Magazine
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်များ
Eng-Mya by(ko soe min)Online Eng to MyanAyar မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်Elglish-Myanmarအင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံး သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ပြန်ကြားရေး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန စီးပွား၊ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားစီမံကိန်း ဘဏ္ဍာ၊အခွန် ပြည်ပ မီဒီယာများ
ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ အာရ်အက်ဖေ ဒီဗွီဘီ ဧရာဝတီ မဇ္ဈိမ ၀ါရှင်တန်ပို့စ် နယူးယောက်တိုင်းစ် ဘန်ကောက်ပို့စ် ChannelNewsAsia CNN Aljazeera VOA RFA DVB BBC သတင်း စုံတယ်နော်
မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) လုလင်မောင် (ဝဲလောင်) နေမင်းခေတ်( နည်းပညာ ) ခင်မောင်စိုး(မွန်ပြည်နယ်-ကျိုက္ခမီ) KP-3 နည်းပညာ ညီနေမင်း (နည်းပညာ) Mobile House:နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) ဒီမှာလဲ ဒေါင်းလို့ရတယ်နော်
Top Downloads Mozilla Firefox Gom Player K-Lite Mega Codec Pack Foxit PDF Reader Kaspersky AVP Miro Nero9Free Edition AIMP Winrar FlashGet Winamp Photoscape Online Make Money here
ESPN ဘောလုံးသတင်းစုံMy- Goal ဘောလုံးပွဲသတင်းS-Myanmarဘောလုံးသတင်းကမ္ဘောဇ Football Clubချလ်ဆီး ပရိတ်သတ်အတွက်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်လီဗာပူး ပရိတ်သတ်အတွက်မြန်မာ့ဘောလုံးချစ်သူများဆိုဒ်နိုင်ငံခြားပွဲစဉ်ရလဒ်များ
နူတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။. Template images by konradlew. Powered by Blogger.